Ahlu Sunnah iyo Galmudug oo kulan loogu qabanayo Jabuuti
JABUUTI- Warsidaha Garowe Online ayaa ogaadey in dabayaaqada bisha Nov,2017 magaalada Jabuuti ee dalka DJabuuti urur goboleedka IGAD kulan ugu qaban doono ururka Ahlu Sunah Waljamaca iyo maamulka Galmudug kasoo daba-socda kulamo labadaan dhinac asbuucii lasoo yeesheen dhaafey ku yeesheen magaalada Nairobi.
Wararka ayaa sheegaya in kulankaan lagu qabanayo dalka Djabuuuti oo ciidamo ka tirsan AMISOM ka joogaan gobolada dhexe ee Soomaaliya qayb ka yahay dadaal urur goboleedka IGAD damacsan yahay inuu ku dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Galmudug iyo ururkaan saldhigiisu yahay magaalada Dhuuso-mareeb.
Dhuuso-mareeb oo dowladii Madaxweyne Xasan Shiikh ku magacowdey xiligii la dhisayey Galmudug magaalo madaxda maamulkaas ayaa urur dimeedka gacanta ku haya waxaa uu diidey inuu qayb ka noqdo awood qaybsiga siyaasadeed ee shirweynihii lagu qabtey xarunta KMG ah ee Cadaado.
Dowlada Madaxweyne Farmaajo oo horaantii sanadkaan ku guuleysan waydey in heshiis dhex dhigto labadaan dhinac kadib markii kulan loogu qabtey magaalasa Muqdisho ka-hor inta aan xilka loo dooran Madaxweynaha mamaulkaan Axmad Ducaale Geele "Xaaf" ayaa ururka Ahlu Sunah Wal-jamaca waxaa uu diidey inuu ka qayb galo doorashooyinkii ka dhacey magaalada Cadaado.
Hogaamiyaha ururkaan Shiikh Axmad Shaakir ayaa kulankii Muqdisho lagu qabtey April, 2017 ku dalbadey in ururkiisa magdhow laga siiyo dagaaladii uu la galey kooxda xag jirka ah ee AL- Shabab dalabkaas oo noqdey mid dowlada Federaalka ah fulin waydey.
Lama oga qodobada urur goboleedka IGAD ku heshiisanayo labadaan dhinac kuwasoo mid-walba sheegto in uu madax ka yahay maamul goboleed dadka Soomaalida ah ee daga gobolada dhexe ee Soomaaliya.
​AMSIOM: Amarka dowladda kaliya ayaa ka soconaya Cadaado
Soomaliya 05.10.2017. 11:16
CADAADO, Somaliya - Taliyaha Ciidamada AMISOM, Jeneraal Cismaan Nuur Subagle ayaa sheegay in amarka dowladda Federaalka Somaliya oo kaliya uu ka soconayo magaalada Cadaado.
Subagle oo Saxaafadda kula hadlayay Cadaado, ayaa xusay in AMISOM ay la wareegtay mas'uu ...
Madaxweynaha Galmudug oo Xilka laga qaadey [Dhageyso]
Soomaliya 26.09.2017. 19:31
Soomaliya 18.11.2017. 11:23